ကိုယ်တို့အကြောင်း - ငါ့အငွေဘလော့ Making
ငါသည်ယောနသန်တယ်, ယခု 23 အသက်အနှစ်ခုနစ်ကလေးတွေနှင့်အတူတစ်မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာ. ကြီးမားတဲ့ညီအစ်ကိုကဲ့သို့, ငါသည်ကြီးမြတ်သောဥပမာသတ်မှတ်ချင်ခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်. အဆိုပါကောလိပ်စနစ်ကအသက်အဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် zest အတွက်ချေမှုန်းရေးခဲ့သည်.
အချိန်ကတဆင့်ကျွန်မအများကြီးသင်ယူတို့နှင့်ကြီးသောအမှတ်ရတယ်, ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတစ်ခုခုပဲရှိခဲ့… ငါကအားလုံးလုပ်ပေးဒါကြောင့်ဖွင့်. ကျွန်မအတိအကျဒီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာတစ်ဦးကအလွန်ရှင်းပါတယ်ရူပါရုံကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်အတိအကျအတိအကျတစ်ချိန်တည်းအတွက်ငါအရမ်းကြောင်းကျောင်းသားအခိုက်ခံစားသည်ဟုမပြောနိုင်ကြောင်း. ဒါဟာရဲခဲ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘယျလိုမှမခံစားခဲ့ရကြောင်း.
ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကပြင်သစ်မှထွက်ခွာဖို့ရွေးချယ်. သူတို့နှင့်အတူပါလျှင်ဘဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအယူအဆတို့သည် လာ., ဒီစိတ်ကူးယဉ်စစ်မှန်တဲ့လာစေရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. ငါသူတို့ထံမှလွှဲပြောင်းယူကြောင်းဉာဏ်ကိုငါ့ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်လှည့်ဖျားပေးထား.
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုအသည်းအသန်, ဒီ Gallant ကောင်လေးပွဲ၌သူ၏ Adventures အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်. တစ်ဦး slot ကစက်၏သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကနေ, ဒီလောင်းကစားရုံ၏နံရံအတွင်းအပြင်သည်သူ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံများမှ. သူသည်အသကဲ့သို့ Gallant, သူကအင်တာနက်ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုရည်မှတ်ရေးသားဖို့တွန့်ဆုတ်နှင့်အွန်လိုင်းဖြစ်ကြောင်း, ဤအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသူရင်ဆိုင်အရာအားလုံးရှငျးပါဘူး. ထို့အပြင်, ဒီ Gallant လူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အငှါးနိုင် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ) အခမ်းအနား. သူကဝန်ဆောင်မှု-oriented အရာကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုကြာ: အင်္ကျီ၏ခွင့်ပြုချက်သို့စစ်ဆင်ရေးအတွင်း